Yintoni uLawulo lweeTekethi zeShishini? Kutheni le nto kufuneka usebenzise uLawulo lweeTek? | Martech Zone
Yintoni uLawulo lweeTekethi zeShishini? Kutheni le nto kufuneka usebenzise uLawulo lweeTek?
NgoMvulo, Julayi 12, 2021 NgoMvulo, Julayi 12, 2021 Douglas Karr
IVerbiage esetyenziswa ngabantu kumzi mveliso inokudideka. Ukuba uthetha ukumakisha ngokubhloga, uya kuthetha ukuba ukhetha amagama abalulekileyo kwinqaku tag yenza ukuba kube lula ukukhangela nokufumana. Ulawulo lwethegi yitekhnoloji eyahlukileyo ngokupheleleyo kunye nesisombululo. Ngokoluvo lwam, ndicinga ukuba alikhange libizwe ngegama ...
Yintoni uLawulo lweeTag?
UkuThengisa indawo yongeza ezinye iithegi zeskripthi kwintloko, umzimba, okanye unyawo lwendawo leyo. Ukuba usebenzisa amaqonga ohlalutyo amaninzi, iinkonzo zokuvavanya, ukulandela umkhondo woguqulo, okanye ezinye iinkqubo zomxholo ezinamandla okanye ekujolise kuzo, phantse kuhlala kufuna ukuba ufake izikripthi kwiitemplate zenkqubo yolawulo lomxholo. Iinkqubo zolawulo lweTag (TMS) zikunika iskripthi esinye sokufaka kwitemplate yakho kwaye emva koko unokulawula bonke abanye ngeqonga lomntu wesithathu. Inkqubo yolawulo lwethegi ikuvumela ukuba wakhe izitya apho ungacwangcisa ngobukrelekrele iithegi onqwenela ukuzilawula.
Ku Shishini umbutho, ulawulo lweethegi lwenza ukuba iqela lokuthengisa, iqela loyilo lwewebhu, amaqela omxholo kunye namaqela e-IT asebenze ngokuzimeleyo omnye komnye. Ngenxa yoko, iqela lokuthengisa ledijithali linokuhambisa kwaye lilawule iithegi ngaphandle kokuchaphazela umxholo okanye amaqela oyilo… okanye benze izicelo kumaqela e-IT. Ukongeza, amaqonga olawulo lwethegi yeshishini anikezela ukuphicothwa, ukufikelela, kunye neemvume ezifunekayo ukuhanjiswa ngokukhawuleza kunye nokunciphisa umngcipheko Ukuphula indawo okanye usetyenziso.
Qiniseka ukuba ufunda iposti yethu ekuthumeleni Ulawulo lwethegi ye-ecommerce, Uluhlu lwee-100 zeethegi ezinokuhanjiswa kunye nokulinganisa unxibelelwano lwabathengi kunye nokuziphatha kokuthenga.
Kutheni le nto iShishini lakho kufuneka lisebenzise iNkqubo yoLawulo lweeThegi?
Kukho izizathu ezininzi zokuba kutheni ungafuna ukubandakanya Inkqubo yolawulo lwethegi kwimisebenzi yakho.
Ku bume beshishini Apho umthetho olandelwayo, ukuthotyelwa, kunye nokhuseleko kuthintela abathengisi ekungeniseni izikripthi ngokulula kwi-CMS yabo. Izicelo zokongeza, ukuhlela, ukuhlaziya okanye ukususa iithegi zeskripthi kwisiza kunokulibazisa amandla akho okulawula iinzame zakho zokuthengisa. Inkqubo yolawulo lwethegi iyayilungisa le nto kuba ufuna kuphela ukufaka ithegi enye kwinkqubo yolawulo lwethegi yakho kwaye emva koko ulawule konke okuseleyo kule nkqubo. Awusoze wenze esinye isicelo kwiqela lakho leziseko zophuhliso!
Iinkqubo zolawulo lweTag zixhotyiswe ngaphesheya uthungelwano lokuhambisa umxholo ezikhawulezayo ngokukhawuleza. Ngokwenza isicelo esinye kwinkonzo yabo kwaye emva koko ulayishe izikripthi kwindawo yakho, unganciphisa amaxesha omthwalo kwaye uphelise ukubakho kwendawo yakho ukuba ingafakwa ngumkhenkce ukuba inkonzo ayihambi ezantsi. Oku kuyonyusa amaxabiso okuguqula kunye nokunceda ukwenziwa kweinjini yokukhangela.
Iinkqubo zolawulo lweeTag zinika ithuba thintela ukumakisha okuphindiweyo, kukhokelela kwimilinganiselo echanekileyo yazo zonke iipropathi zakho.
Iinkqubo zolawulo lwethegi zihlala zibonelela khomba kwaye ucofe ukudityaniswa ngazo zonke izisombululo zokumakisha kwiwebhusayithi yakho. Akukho sidingo seetoni zekopi kunye nokuncamathisela, ngena nje ungene kwisisombululo ngasinye!
Iinkqubo ezininzi zolawulo lwethegi ziye zavela kwaye zibonelela ngezisombululo ezomeleleyo ze uvavanyo lokwahlulahlula, uvavanyo lwe-A / B, uvavanyo lwe-multivariate. Ngaba ufuna ukuvavanya umxholo omtsha okanye umfanekiso kwindawo yakho ukuze ubone ukuba yonyusa ukubandakanyeka okanye ucofe amaxabiso? Qhubeka ngqo!
Ezinye iinkqubo zolawulo lwethegi zide zibonelele ukuhanjiswa komxholo okuguqukayo okanye okujolise kuko. Umzekelo, unokufuna ukutshintsha amava endawo yakho ukuba undwendwe ngumthengi ngokuchasene nethemba.
Izibonelelo ezili-10 zoLawulo lweeTek
Nalu uphononongo olukhulu lwe-infographic yezibonelelo ezili-10 zolawulo lwethegi kubathengisi bedijithali abavela Nabler.
Iinkqubo zeNkqubo yoLawulo lweeTek (TMS)
Oku kulandelayo luluhlu lwe Izisombululo zolawulo lwethegi yeshishini, qiniseka ukubukela iividiyo kwezinye zezi ngcaciso ethe kratya malunga nokubanakho kolawulo lwethegi kunye neenkqubo zolawulo lweethegi.
Ukusungulwa kweqonga lamava eAdobe -Ukuzama ukulawula ukuthunyelwa kwicala labathengi kuzo zonke iitekhnoloji kwisitaki sakho sentengiso kunokugcwala kwimiceli mngeni. Ngethamsanqa, ukuSungulwa kweQonga lamava kwakhiwe yoyilo lokuqala le-API, evumela ukuba iskripthi sisebenzise ukuhanjiswa kwetekhnoloji, ukupapasha ukuhamba komsebenzi, ukuqokelelwa kwedatha kunye nokwabelana, nokunye okuninzi. Ke imisebenzi edla ixesha elidlulileyo, njengokulawulwa kwethegi yewebhu okanye ukumiselwa kweselfowni ye-SDK, kuthatha ixesha elincinci-kukunika ulawulo oluphezulu kunye nokuzenzekelayo.
Khanyisa -Ukulawula zonke iithegi zakho zomthengisi kunye nedatha kusetyenziswa ujongano olunye olunomdla, olubonisa ngaphezulu kwe-1,100 yokudityaniswa komthengisi wokujika. Dibanisa kwaye ubeke emgangathweni imithombo yolwazi eyahlukileyo kubuchwephesha nakwizixhobo ukuqhuba i-ROI enkulu ukusuka kwitekhnoloji yakho eguqukayo kwisitaki somphathi wedatha enye.
Umphathi weTekisi yeGoogle Umphathi weTek kuGoogle ukuvumela ukuba ungeze okanye uhlaziye iithegi zakho zewebhusayithi kunye nokusetyenziswa kweselfowni, ngokulula nangokukhululekileyo, nanini na ufuna, ngaphandle kokufaka iifayile kubantu be-IT.
Iteam IQ -I-Tealium iQ yenza ukuba imibutho ilawule kwaye ilawule idatha yabathengi bayo kunye nabathengisi beMarTech kwiwebhu yonke, iselfowuni, i-IoT, kunye nezixhobo ezixhumeneyo. Ukuxhotyiswa kwendalo engaphezulu I-1,300 yokudityaniswa komthengisi wekeykey enikezelwa ngeethegi kunye neeAPIs, unokuhambisa ngokulula kwaye ulawule iithegi zabathengisi, kuvavanye itekhnoloji entsha, kwaye ekugqibeleni uthathe ulawulo lwestaki sakho sobugcisa bokuthengisa.
tags: Amava eAdobe aqaliswa ngamafuiqonga lamava kaAdobeukuqaliswa kwe-adobeUmphathi wethegi yeAdobeukuqhubela phambiliUlawulo lwethegi yeshishiniumphathi wethegi yeshishiniUmphathi wethegi kaGoogleUlawulo lwethegiIiplatifti zolawulo lwethegiInkqubo yolawulo lwethegiItheyibhile iqTM
I-YouTube: Uyibonelela njani ngeArhente yakho okanye uVideographer ngokuFikelela kuMsebenzisi kwisiteshi sakho